Ny akanjo OnePlus voalohany dia ho brasele miisa | Androidsis
Herinandro lasa izay, namoaka lahatsoratra iray izahay izay nanoroanay anao ny Ny fikasan'ny OnePlus handefa ny smartwatch voalohany eny an-tsena. Rehefa mandeha ny andro, tsikelikely dia mipoitra ny vaovao vaovao momba izany. Ny vaovao farany mifandraika amin'ireto drafitra ireto dia manome soso-kevitra ny amin'ny voalohany azo anaovana ho fehin-tànana miantra io.
Raha ny filazan'ny tovolahy avy amin'ny Android Central, OnePlus dia handefa bracelet miisa isa mandritra ny telovolana voalohany amin'ny 2021 ary eo amin'ny 40 $ eo ny vidiny eo ho eo, lasa fifaninanana mivantana ho an'ny Galaxy Fit 2 sy ny Xiaomi Mi Band 5, na dia ho sarotra aminy aza ity farany, satria, amin'ny vidiny, dia mpanjakavavin'ny tsena io.
Azo inoana fa manana efijery OLED ity bracelet ity, tsy tantera-drano ary ho maro andro ny androm-piainany. Raha raisintsika fa ny OnePlus sy ny Oppo dia ao anatin'ny vondrona iray ihany, dia azo inoana fa ny endriny dia mitovy amin'ny Oppo Band, ny fehin-tànana manisa izay natombok'i Oppo tamin'ny tapaky ny volana Jona. Ohatra iray mazava no hita ao amin'ilay faritra vaovao OnePlus izay natombok'ilay orinasa tamin'ny fiandohan'ny volana Novambra, ny terminal dia azo zahana ireo izay efa natolotry ny Oppo volana maro lasa izay.
Ny Oppo Band dia manana efijery 1.1-inch AMOLED, mampiditra maody 12 hanarahana mandeha ho azy ny fanatanjahantena izay ataontsika, mahazaka rano hatramin'ny 50 metatra nefa tsy mampiditra GPS. Ny vidiny any Chine dia 199 yuan, izay manodidina ny 30 dolara ho takalony.
Amin'izao fotoana izao fantatsika fa tsy fantatsika raha ny rafitry ny fandidiana izay hampidiriny dia ny WearOS na ny rafitra fiasan'ny orinasa iray, na dia toa manondro aza ny zava-drehetra fa io no vahaolana ho an'i Google, satria nilaza ny filohan'ny OnePlus fa miasa amin'ny Google amin'ny akanjo azo ampiasaina izy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » OnePlus » Ny akanjo OnePlus voalohany dia ho fehin-tànana miisa
Ny Oppo Reno5 4G dia nambara tamin'ny Snapdragon 720G sy ColorOS 11
Ahoana ny fomba fandraisam-peo feo memo nefa tsy manindry ny bokotra amin'ny WhatsApp